Google Stadia inotsvaira; Microsoft, Sony uye Nintendo havana chekuita ... | Linux Vakapindwa muropa
Google Stadia inotsvaira; Microsoft, Sony uye Nintendo havana chekuita ...
Google yakaunza Stadia, Haisi imwe chete chikuva chemitambo, asi iyo PLATFORM iyo inokwezva vatambi kutenderera pasirese, uye haisi iyo yakasarudzika chikuva, asi asi zviri nyore, unongoda mudziyo unoenderana neGoogle Cast (Chrome browser) uye izvo zvichave zvakakwana kutamba, saka yako GNU / Linux distro inobvumirawo. Izvo chaizvo ndizvo zveimwe hunhu hunoshamisa hweStadia, kuti iwe unogona kutamba waunofarira mutambo wevhidhiyo kubva kune smart TV, smartphone, mapiritsi, kana PC, uye hazvina basa kuti ndeipi sisitimu yekushandisa yaunomhanya pairi.
Google Stadia yakaunzwa kumusangano weGDC 2019 o Game Vagadziri Musangano 2019, uye Google yakatsvaira chiitiko ichi neichi chisingatarisirwe uye chine simba mutambo wekutamba uyo unovimbisa kupwanya vanopikisa kubva kuMicrosoft, Sony uye Nintendo. Uye ichazviwana zvichibva mukuenderana kwavo kwakanaka, chinzvimbo, hunyanzvi uye nyaradzo dzavanopa kumushandisi. Uye zvakare, uri wekutamba yevhidhiyo mutambo wepuratifomu, iwe unozokanganwa nezve kurodha pasi, zvigamba uye nekuvandudza, uchifanira kuisa, nezvimwe. Iwe unozowana zvese zvirimo nekukasira, tinya Play uye mumasekondi unenge uchitandara nemusarudzo wevhidhiyo ...
Kutenderera kunoitwa nezvisingaenzanisike maficha maererano nemhando, kunyanya 4K HDR resolution pa60 FPS (vanoronga kuiisa ku8K uye 120 FPS mune ramangwana). Izvo hazvitsvaki koni, asi zvinotangisa ne mando yemutambo wevhidhiyo wakasarudzika waunofanira kutenga uye watiri tisina mutengo wacho. Kuwedzera kune zvakajairika kutonga kwevhidhiyo mutambo mutambo, zvinosanganisira vamwe kutora mifananidzo uye vhidhiyo mutambo zvemukati zvakananga. Uye pachave paine bhatani reGoogle Mubatsiri, izvo zvichatibatsira kuita mashandiro akasiyana ebasa, uye kwatinogona kubvunza kunyangwe kubatsirwa nezve mutambo wevhidhiyo kana manomano kana rubatsiro kupfuudza nhanho kana skrini yemutambo wevhidhiyo mu izvo isu takanamatira, zvese nekuda kweAI yakaitwa muGoogle server.
Mutungamiriri haashandise tambo, asi kuburikidza neWiFi inosangana kune komputa yako kana chishandiso kutamba uye zvakare inozviita zvakananga kumaseva eGoogle Stadia kutamba. Mamwe maseva akaisirwa munzvimbo hombe yedhata ine iyo 7500 node server Linux-yakavakirwa kutenderera zvemukati zvakananga kune yako Google Chrome skrini. Zvakareruka, zvakapusa senge izvozvo, asi zvine simba ... saka unogona kutamba kubva kune chero chishandiso, nekutenda kune yakasarudzika yeStadia, senge materevhizheni kana Android mabhokisi anoenderana neChrist Cast, uye ese maApple uye Android nhare mbozha dzine Chrome app yakaiswa, uye sezvandambotaura, zvakare chero PC iine Windows, macOS kana Linux yakaiswa.
Hardware uye Zvimiro:
Kwete chete iwe yaunoda supercomputer kana sevha seiyo iyo Google inayo mune yako yakajairika data centre, asiwo a Hardware uye maficha yakaitwa iyo ndiyo shanje yeindasitiri. Mukati mayo inochengeta zvakavanzika zvikuru, enableable Hardware iyo yekuzadzikisa maficha makuru uye kupfuura izvo zvazvino zvine simba vhidhiyo consoles kubva kuMicrosoft uye Sony, uyezve iyo Nintendo, ndiko kuti, Xbox, PS, nezvimwe.
Yeiyo Stadia chirongwa, Google ingadai yakagona pasina mubatsiri wezve tekinoroji, uye izvo zvanga zviri mune ino kesi yayo AMD p, iyo ine yavo yakabudirira semicustom machipisi ayo ari kuve nekubudirira kwakanyanya mumitambo yekunyaradza, ndiwo zvakare moyo weiyo Stadia chikuva, uye kuipa iyo graphic kugadzirisa inosvika 10,7 TeraFLOPS, izvo sezvandataura, zvinopfuura chero zvazvino mutambo weconsole Kuti uwane zano, iyo PS4 Pro inongorova 4.2 TFLOPS uye iyo Xbox One X inorova 60 TFLOPS. Sezvazvinoita? Heino runyorwa rwe Hardware:
Sarudzo: 4K HDR pa60 FPS
Project Stream: kusvika 1080p pa60 FPS
CPU: AMD tsika 2.7Ghz x86-yakavakirwa multithreading pamwe neAXX2 SIMB yekuwedzera (Zen-yakavakirwa)
GPU: Tsika AMD ine 56 komputa GPU kuti ibudirire 10.7 TFLOPS ine HBM2 memory
Graphics API: Vulkan yeiyo chaiyo-nguva 3D mifananidzo
Ndangariro: 16GB ye2GB / s bandwidth HBM484 VRAM + DDR4 RAM
Inoshanda system: Linux
Google Data Center: 7500 Google Edge Network compute node dzinomhanya Linux
Kubatana: WiFi ine hukama hwakanangana neStadia
Kugarisana: ese Google Cast inoenderana zvishandiso
Mutengo: haisati yavapo
Ichi chichava chimwe chezvirongwa zvinonakidza zve 2019? Tichaona, asi ini ndinonzwa kuti pamwe neakapetwa Samsung Galaxy Fold, iyi ndeimwe yeakanakisa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google Stadia inotsvaira; Microsoft, Sony uye Nintendo havana chekuita ...
Latin America shit yakamira kuti google ichaisa sevhisi iyi kwauri!
Pindura kuna cusa123
Haisati yambovhurwa uye Google Stadia yatotsvaira.
Pfungwa haina kuwanikwa.
Pindura kuna sasdf
Chaizvoizvo sevhisi inoda yakakosha Internet zvivakwa iyo inoderedza kunonoka. Zvivakwa zvekuiswa neGoogle. Izvo hazvizove zvinoenderana neyakajairika Internet masevhisi.
Kune rimwe divi zvese zvinoenderana nezviri mukati. Kana iwe ukasawana yako Fornite, kana kunyangwe Angry Shiri dzako ini ndinokahadzika kuti vanhu vafarire.
Uye ini handidi kubheja kuenderana kweLinux, ini ndichakamirira mutengi wepamutemo weGoogle Drive
Isu tinoita runyorwa rweGoogle masevhisi anga achizodya nyika?
4) Google Girazi
Zvakare, huwandu hwedata pane vashandisi urikuzogadzira izvo. Ini handisi mutsigiri waStallman, asi ndipo pandiri naye.
Ndine shamwari dzechiJapan dzakaedza switch gore uye vakaedza makore masystem
uye ivo vari utsi kunyangwe Japan ine internet yakanaka kwazvo kana komputa yako isina simba inogona kupisa nhanho iyi nekugara kwakaipa 7 mune swich
ipapo pane izvozvi uye kudarika kuchaziva kuti iko kuzadza kwemaseva uye kuti mune mimwe mitambo vanofamba sei kunge vari mumvura
Ndiri kuona izvi sezvinobvira muna 2030 kusvika 40
Pindura kuna kaiser
Ini handinzwisise mutori venhau: Google haisati yatengesa f * cking mutambo asi iye anototi "Google Stadia iri kutsvaira; Microsoft, Sony neNintendo havana chekuita ... chiziviso nemaziso akavharwa mutori venhau.! uye iwe unogona kuona kuti iwe hausi mutambi zvakare. chinosarudza kuti chikuva chakabudirira kana kwete ndeyeGAMES chete, pamusoro pezvose zvakasarudzika uye mune iyo playstation uye xbox (kunyanya PS) haina fananidzo. kubvira 3 (2012 makore apfuura) PS inogona kuita mitambo yekutamba ... asi haina kuipa mukurumbira wakawanda uye purofiti yezvikonzero zvebhizinesi zviri nyore, hapana chinhu chiri nani kupfuura koni yezvikonzero zvinoverengeka, kunze kwaizvozvo, haufunge tsime ... iwe unoti «vatambi vachachengetedza iyo koni" asi zvinoitika kuti Google chikuva chinoda kuti mari kubva kune ma gamers kumhanya uye kuendesa ... ... iyo stadia musika ingave iri "yakasarudzika" vatambi ... asi pane dambudziko: nekuti irwo rudzi rwevatambi vanonyorera nekusingaperi (nekusingaperi nekuti zvikasadaro bhizimusi raizorasikirwa negoogle) kusevhisi? Ini ndaisatoda. iwe unofanirwa kutanga kushandisa mauroni ako
Pindura kune vakatendeka
KDE Unganidzo yakabviswa kubva kuGoogle Play kutyora mutemo
Pamutemo Russia ichave nyika yakaongororwa pane internet